Liberia: Ebola khatar ayeey nagu heysaa - BBC News Somali
Liberia: Ebola khatar ayeey nagu heysaa
Saraakiisha caafimaadka ee dalka Senegal ayaa sheegay in arday u dhashay dalka Guinea, oo ahaa qofkii ugu horreeyey oo lagu arko cudurka ebola gudaha Senegal uu baksooday.
Saraakiil ka tirsan wasaarada caafimaadka ee dalka Senegal ayaa sheegay in wiilkaasi baaritaan lagu sameeyey lagu ogaaday in cudurkaasi uu ka boksaday kadib markii la daweeyey.
Hay'adda Caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa ka digtay in ay suurtagal tahay in kumanaan kun oo qof oo kale uu ku dhico cudurka Ebola dalka Liberia, oo ah waddanka haatan sida daran uu ugu fiday cudurkan.
2, 288 qof ayaa ilaa iyo imika la ogyahay in ay ugu dhinteen cudurkan waddamada Liberia, Guinea iyo Sierra Leone
WHO ayaa waxay sheegaysaa in kalabar dhimashadaasi ay dhacday seddexdii todobaad ee la soo dhaafay.
Dalka Nigeria, 8 qof ayaa u dhintay cudurka, iyadoo ccudurka laga helay 21 qof.
Xog ku saabsan Liberia
Kaabayasha dalka waxaa halakeeyey dagaal sokeeyo oo 14 sano socday
250,000 ayaa ku dhintay dagaaldaasi oo dhamaaday 2003
Halkii dhaqtarba waxaa ku soo aadayso 100,000 oo qof ka hor inta uusan dillaacin ebola
Kiisaska ebola ee sandkan waa 2,046
Tirada u dhimatay ebola illa iyo hadda 1,224
Tirada guud dadweynaha dalka oo dhan waa 4.4 milyan
Wasiirka difaca ee Liberia Brownie Samukai ayaa gollaha ammaanka ee QM u sheegay in jawaabta caalamiga ah ee laga bixiyey cudurka Ebola ay ahayd mid aanan aad u firfircooneyn.
Mr. Samukai waxa uu sheegay in cudurka uu cagta marinayo wax alaala iyo wixii ka hor yimaada
Waaxda caafimaadka ee dalkaas oo markii horaba ahayd mid liidata ayaa waxa la sheegayaa in uu ka tan badiyey cudurka, wasiirkuna waxa u sheegay gollaha ammaanka ee QM in Liberia aanay haysan kaabayaal dhaqaale o ku filan oo ay cudurkan kula dagaalanto.
WHO oo ka digeysa kiisas cusub oo Ebola
Senegal oo laga helay cudurka Ebola
8 Sebtembar 2014